Vaovao - Ny andraikitry ny fonosana entam-barotra
Amin'ny ankapobeny, ny vokatra dia mety manana fonosana maromaro. Matetika ny kitapo misy paosy nify dia misy baoritra ivelany, ary boaty baoritra dia tokony hapetraka ivelan'ny baoritra ho fitaterana sy fikirakirana. Ny fonosana sy ny fanontana amin'ny ankapobeny dia manana asa efatra samy hafa. Androany, ny tonian-dahatsoratry ny China Paper Net dia hitondra anao hianatra bebe kokoa momba ny atiny mifandraika amin'izany.
Manana fonosana efatra ny fonosana:
(1) Ity no andraikitra lehibe indrindra. Izy io dia manondro ny fiarovana ireo entana fonosana amin'ny risika sy fahasimbana toy ny fivoahan'ny rano, fako, halatra, fahaverezana, fanaparitahana, fanitsakitsaham-bady, fihenan-tsasatra ary fandotoana. Mandritra ny vanim-potoana manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fampiasana azy dia tena ilaina ny fepetra fiarovana. Raha tsy afaka miaro ny ao anatiny ny fonosana dia tsy fahombiazana ity karazana fonosana ity.
(2) Manomeza fanamorana. Ireo mpamokatra, mpivarotra ary mpanjifa dia tsy maintsy mamindra ny vokatra avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Ny nify na ny hoho dia azo esorina mora foana ao amin'ny trano fanatobiana entana amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo ao anaty baoritra. Ny fonosana pickles sy vovoka fanasan-dàlana tsy manelingelina dia voakasiky ny kely ankehitriny nosoloin'ny fonosana; amin'izao fotoana izao, tena mety amin'ny mpanjifa ny mividy sy mody.
(3) Ho an'ny famantarana, ny maodelin'ny vokatra, ny habetsany, ny marika ary ny anaran'ny mpanamboatra na ny mpivarotra dia tsy maintsy aseho amin'ny fonosana. Ny fonosana dia afaka manampy ny mpitantana trano fitehirizana hahita vokatra marina, ary afaka manampy ny mpanjifa hahita izay tadiaviny koa izy ireo.
(4) Mampiroborobo ny varotra marika sasany, indrindra any amin'ireo magazay voafantina. Ao amin'ny magazay, ny fonosana dia manintona ny sain'ny mpanjifa ary afaka manova ny sainy ho liana. Mihevitra ny olona sasany fa “takelaka bileta avokoa ny boaty fonosana rehetra.” Ny fonosana tsara dia mety hampitombo ny fahatsaran'ny vokatra vaovao, ary ny lanjan'ilay fonosana io dia mety hanosika ny mpanjifa hividy vokatra iray. Ankoatr'izay, ny fampitomboana ny manintona ny fonosana dia mora kokoa noho ny fampiakarana ny vidin'ny singa amin'ny vokatra.